Mozilla inoremadza chirongwa cheTest Pilot uye iyo Firefox Screenshots sevhisi | Linux Vakapindwa muropa
Mozilla inoremadza iyo Test Pilot chirongwa uye iyo Firefox Screenshots sevhisi
Vagadziri veMozilla imwe nguva yapfuura vakasarudza kuita iyo Test Pilot chirongwa, umo vashandisi vakave nemukana wekuyera uye kuyedza yekuedza mabasa izvo zviri kugadzirirwa zvenguva yemberi shanduro yeFirefox.
Naizvozvo kubva muna Ndira 22 wegore rino 2019, iyo Test Pilot chirongwa rinomisa basa rakoAsi zvese zvekuyedza zvekugona zvatoiswa zvicharamba zvichishanda pane masisitimu evashandisi vakakwanisa kuita bvunzo idzi.
Pamusoro peichi chisarudzo, zvakare Vagadziri veMozilla vakafunga kushandura mashandiro eFirefox Screenshots, zvichipiwa izvo zvichibva pahuwandu hwakawanikwa kubva mushanduro dzichangoburwa kubvira pawakaunzwa, basa iri harina kuzoshandurwa nenzira yavaitarisira.
1 Rombo rekuyedza Pilot
1.1 Iine iyo data yakaunganidzwa, chirongwa ichi chakazadzisa basa rayo
2 Firefox Screenshots inoshandura nzira iyo inochengetedza ma skrini
Rombo rekuyedza Pilot
Iko kurongedzerwa kuita kwekuyedza kucharamba kuripo zvishoma muchimiro chekuwedzera Izvi zviripo zvekumisikidza kubva kune addons.mozilla.org katalog.
Zvekuyedza maficha izvo zvisingaitwe muchimiro chemubatsirios, senge Firefox Lockbox (iyo inopa mukana wekupinda mumazita nemapassword akachengetwa muFirefox) uye Firefox Tumira (faira rekugovana chishandiso), ivo vacharamba vachigadzirwa sezvigadzirwa zvakasiyana zvisina kusungirirwa kuFirefox.
Izvo zvakakosha kutaura izvozvo kutora chikamu muchirongwa chinodiwa kuisa plugin yeTest mutyairi weyakakosha bvunzo, iyo Iyo inobvumira mushandisi kumisikidza uye kuyedza prototypes pamwe nekumisikidza kwemabasa matsva ewebhu browser.
Mukuita kwebasa, Bvunzo Pilot akaunganidza ndokutumira asingazivikanwe manhamba nezvehunhu hwebasa nezvakaedzwa zvinowedzerwa.
Pamberi pesumo yako huru kubrowser yepakati, Kwayedza Pilot yakawana maficha senge Activity Stream, Firefox Screenshots, uye maturusi ekudzivirira kufamba kwekutevera.
Iine iyo data yakaunganidzwa, chirongwa ichi chakazadzisa basa rayo
Vagadziri veFirefox vanotiudza izvozvo Iyo Test Pilot chirongwa chakabudirira, asi chinoda kudyara kwakakosha kweinjiniya zviwanikwa.
Mukupedzisira, kuchengetedza chikuva chakaparadzaniswa chekugadzira zviyedzo kwakaonekwa kusiri kuchenjera nevagadziri veMozilla.
Panzvimbo yeTest Pilot, modhi nyowani yakarongedzwa kuti iongorore zvese zvitsva mabasa uye masevhisi izvo zvakarongwa mune ramangwana kana izvo zviri kuda kuenda kuchikamu chekuyedza.
Iyi nyowani yakatsanangurwa modhi inotarisa pakushandiswa kweyega bvunzo kutenderera ine yakafararira kufukidza kwevashandisi, asi iine pfupi bvunzo nguva (kusiyana neTest Pilot, kuyedza uku hakudi kugara kuchichengetwa).
Muenzaniso weimwe nzira yekuyedza chirongwa cheFirefox Monitor sevhisi, muenzaniso wekuyedza uyo wakarongedzerwa kuyedza vashoma vashandisi vevashandisi venguva dzose yeFirefox, pasina kushandisa chirongwa cheTest Pilot.
Iyo modhi inoenderana nesarudzo yekudzora yevashandisi chaiye yakawanikwa ichinyanya kushanda pane kushandisa diki rakaparadzaniswa boka revanoongorora.
Mune ramangwana, mabasa ekuyedza kuyedzwa anozopihwa kune vashandisiwo zvavo (bvunzo hadzina kumisikidzwa uye mushandisi akasununguka kubvuma kana kuramba), pachinzvimbo chekubatanidza denderedzwa rakamanikana revashandisi veiri basa avo vakabatana zvakajeka nemiedzo uye vakaisa iyo Test Pilot yekuwedzera
Firefox Screenshots inoshandura nzira iyo inochengetedza ma skrini
Kune avo vasingazive nezve sevhisi Firefox screenshots tinogona kukuudza izvozvo Izvi zvinobvumidza mushandisi kurodha pasi iwo mapikicha eiyo peji akagadzirwa mubrowser uye ovagovana nevamwe vashandisi.
Mifananidzo yakadzingwa inoramba iripo mune yakananga link iyo mushandisi yaanogona kugovana nevamwe vashandisi kana kungoichengeta kuitira kuti vagone kutora izvo kutora mazuva gumi nemana asati apfuura.
Tinogona kutaura izvozvo sarudzo yekuvhara Firefox skrini kubva kubasa repamhepo, yakanunurwa kubvira pakatangwa Firefox 59, ichaponeswa, asi ichaganhurirwa pakuchengeta screenshots yemapeji ewebhu chete pane yemuno system, pasina mukana wekuti udzorere kumakore.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Mozilla inoremadza iyo Test Pilot chirongwa uye iyo Firefox Screenshots sevhisi
Zvakanaka, enda tinya nemapikicha:
Kuti uwane imwe nzira, iyo isingakurumidze uye nyore.
Iyo nyowani vhezheni yeDepin OS 15.9 yakatoburitswa kare
Ultra Off-Road Simulator 2019: Alaska iri kuuya yeLinux